IPineNote, umthombo ovulekile we-Pine64 eReader ungafika kulo nyaka | Kusuka kuLinux
IPineNote, umthombo ovulekile we-Pine64 eReader ungafika kulo nyaka
Ezinsukwini ezithile ezedlule umphakathi wasePine64 (Kunikezelwe ekwakheni amadivayisi avulekile) umemezele ukuthi usevele usebenza encwadini kagesi ethi «PineNote», lokhu ngemuva kweminyaka eminingana lapho umphakathi ubukade ucela ukwakhiwa kwethuluzi elinjalo.
Njengamanje imininingwane ekhonjiswe ku-PineNote, yilokhu izofakelwa isikrini esingu-10,3 amasentimitha ngaphezulu isisekelo se-e-ink, ngaphezu kweqiniso lokuthi idivayisi isuselwe ku-SOC Rockchip RK3566 nge-processor AI-Quad-core RM Cortex-A55, Isisheshisi se-AI RK NN (0.8Tops) neMali G52 2EE GPU (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0), okwenza idivaysi ibe ngenye yamadivayisi enza kahle kakhulu ekilasini layo.
Kade besicela ukuthi senze i-e-ink device iminyaka, futhi empeleni besibheke ukuyenza ekuqaleni kuka-2017. Ngikhumbula ngisho nokuxoxa esidlangalaleni ngemibono namalungu omphakathi ngaleso sikhathi futhi ngicwaninga ukuthi iyiphi iSoC ebingafaneleka kakhulu kudivayisi yalolu hlobo.
Idivayisi izothunyelwa nge I-4 GB ye-RAM (LPDDR4) kanye no-128 GB wememori ye-eMMC. Isikrini esingu-10,3-intshi sakhiwe ngesisekelo se-inki kagesi (i-e-ink), sisekela isisombululo samaphikseli ayi-1404 × 1872 (227 DPI), ama-16 shades of grey, i-backlight enokukhanya okuguquguqukayo, kanye nezendlalelo ezimbili ukuhlela okokufaka : thinta. (ingilazi eyi-capacitive) yokulawula ukuthinta kanye ne-EMR (i-resonance kagesi) yokufaka kusetshenziswa ipeni le-elektroniki (ipeni le-EMR).
IPineNote nayo inamakhrofoni amabili nezipikha ezimbili zomsindo, isekela i-WiFi 802.11 b / g / n / ac (5Ghz) futhi ifakwe ichweba le-USB-C nebhethri le-4000mAh. I-bezel yangaphambili yenziwe nge-magnesium alloy kanti ikhava yangemuva yenziwe ngepulasitiki. Idivayisi ingu-7mm kuphela ubukhulu.
Ngaleso sikhathi, besibheke ukudala enye indlela eya ezingeni lokungena Kindle nakwabanye abafundi abakhulu be-e. Kodwa-ke, sifunde ngokushesha ukuthi imikhiqizo emikhulu ixhasa kakhulu ama-e-readers ayo ngokuthengisa izincwadi futhi noma ngabe besingathengisa i-e-reader evulekile ngezindleko (noma ukulahlekelwa), besingakwazi ukufanisa intengo amadivayisi athandwayo.
Ngenhlanhla, indawo yezobuchwepheshe kanye nalokho okungafinyelelwa nge-e-ink kushintshe kakhulu kusukela ngo-2017. Selokhu kumenyezelwe iRock3566's RKXNUMX, besisazi ukuthi ithuba lethu lokwenza umshini ovulekile we-e-ink selifikile.
Ngokuqondene nengxenye ye- isofthiwe ukondla i- «PineNote» lena isuselwa ku-linux ngokusekelwa kweRockchip RK3566 SoC eyayivele ifakiwe ku-kernel eyinhloko ye-Linux ngenkathi kwenziwa ibhodi leQuartz64.
Isilawuli sokubonisa i-e-paper sisakhiwa, kepha sizobe sesikulungele ukukhiqizwa. Kuhlelwe ukuthi amaqoqwana okuqala azoshicilelwa nawo IManjaro Linux efakwe kuqala neLinux kernel 4.19.
Kuhlelwe ukusebenzisa I-KDE Plasma Mobile noma ideskithophu yedeskithophu ye-KDE Plasma eguqulwe kancane njengegobolondo langokwezifiso. Kodwa-ke, intuthuko ayikaqedwa futhi ukugcwaliswa kokugcina kwesoftware kuzoya ngokuthi ubuchwepheshe obukhethiwe busebenza kanjani kwisibonisi esisekelwa ephepheni.
Le nyanga iletha izindaba iningi lenu ebelilinde iminyaka: Ukwethula iPineNote, idivaysi ephezulu ye-e-ink esuselwa kukhompyutha enamandla eyodwa yeQuartz64.
Kepha izindaba ezimnandi azipheli lapha, ikhibhodi yePinePhone isiye ekukhiqizweni, onjiniyela baqale ukusebenza emacaleni angemuva wePinePhone, ukuthuthukiswa kwePineDio kuyaqhubeka futhi sibone inguqulo entsha ye-firmware yePinebook Pro touchpad. umhlaba omningi wokumboza kule nyanga, ngakho-ke ake sifinyelele kulokho.
Okokugcina kulabo abanentshisekelo ku-PineNoteKufanele wazi ukuthi okwamanje isisesigabeni sangaphambi kokukhiqizwa futhi kufanele iqale ukuthengiswa (uma konke kuhamba kahle) kulo nyaka nge $ 399.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IPineNote, umthombo ovulekile we-Pine64 eReader ungafika kulo nyaka
I-KDEApps3: Izicelo Zomphakathi ze-KDE ze-Graphical Management